Tababare Solari oo ka hadlay guuldaradii lama filaanka ahayd ay kala kulmeen kooxda Girona – Gool FM
Dajiye February 17, 2019
(Real Madrid) 17 Feb 2019. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Santiago Solari ayaa xaqiijiyay sababta ugu weyn ee guuldaradii lama filaanka ahayd ay kala kulmeen kooxda Girona.
Santiago Solari ayaa sheegay in guuldaradan aysan sabab u ahayn xaalad jireed ee ciyaartoyda kooxda, balse ay sabab buuxda u tahay diirad saarid la’aan, isla markaana ay ceyb ku tahay in kulamadan oo kale ay iska lumiyaan dhibco muhiim u ah kooxda.
Kooxda Girona ayaa soo afjartay guulaha xiriirka ahaa kooxda Real Madrid ee horyaalka La Liga, kadib markii ay kala laabteen garoonka Santiago Bernabéu guul 2-1 ah.
Hadaba Santiago Solari ayaa ciyaarta kadib la wadaagay saxaafada:
“Waa wax laga xumaado, waa wax ceeb ah inaan lumino dhibco, kadib guulihii aan kasoo gaarnay kooxa adag ee naga horyimid, waa inaan markale guuleysanaa”.
“Waxaan sii wadi doonnaa inaan u dagaalano saddexda tartan aan qeybta ka nahay, kulamada oo dhan waa kuwo aad u adag, waa inaan sii wadnaa isku dayga aan ku dooneyno inaan guuleysano, si aan u soo yareyno farqiga”.
“Waxaan xakameynay ciyaarta qeybtii hore, waxaan dhalinay gool, balse waxay ahayd inaan dhalino goolal badan, qeybtii labaad ee ciyaarta, si adag ayay inoo weerareen, waxayna dhaliyeen 2 gool”.
“Caqabada kaliya ma ahan mid ku saleysan arin jireed, ee waa arin ku aadan diirad saarid la’aan iyo waxyaabo kale ee maskaxeed, iyadoo aan ka war qabno inaan ka imaanay kulamo adag oo aan ku guuleysanay”.
Wrestler Rusev oo ugu baaqay Sergio Ramos inuu ku biiro WWE/MISAARICADA